2 Ɔhene Artasasta+ afe a ɛto so aduonu,+ ɔsram Nisan+ mu no, ɛbae sɛ na bobesa si n’anim, na sɛnea meyɛ daa no, mefaa bobesa no de maa ɔhene.+ Nso na m’anim nyɛɛ mmɔbɔmmɔbɔ n’anim da.+ 2 Ɛnna ɔhene bisaa me sɛ: “Dɛn nti na w’anim ayɛ mmɔbɔmmɔbɔ+ sɛɛ, bere a wonyare? Eyi nyɛ biribiara sɛ koma mu awerɛhow.”+ Ɛmaa ehu kɛse kaa me. 3 Na meka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Ɔhene, nya nkwa daa!+ Dɛn nti na m’anim renyɛ mmɔbɔmmɔbɔ, bere a kurow+ a m’agyanom adamoa wom+ adan amamfõ na n’apon nso, wɔde ogya ahyew?”+ 4 Ɛnna ɔhene bisaa me sɛ: “Dɛn na wopɛ sɛ woyɛ?”+ Ntɛm ara na mebɔɔ ɔsoro Nyankopɔn+ mpae.+ 5 Ɛno akyi no meka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Sɛ eye wɔ ɔhene ani so,+ na sɛ w’akoa anya w’anim dom a,+ ma menkɔ Yuda kurow a m’agyanom adamoa wom no mu na mensan nkɔkyekye.”+ 6 Na ɔhene a ɔhemmaa te ne nkyɛn no bisaa me sɛ: “W’akwantu no bedi nna ahe, na da bɛn na wobɛsan aba?” Mehyɛɛ ɔhene da,+ na na eye+ wɔ n’ani so sɛ ɔbɛma makɔ. 7 Na meka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Sɛ eye wɔ ɔhene ani so a, ma wɔmma me nkrataa+ nkɔma amradofo+ a wɔwɔ asubɔnten kɛse no agya no,+ na wɔama matwam akɔ Yuda; 8 ne krataa nso a mede bɛma ɔhene kwae sohwɛfo Asaf, na wama me nnua a mede bɛyɛ ofie+ no Abankɛse apon,+ ne kurow no afasu+ ne ofie a merekɔ mu no ho adwuma.” Enti ɔhene de maa me, me Nyankopɔn papayɛ nsa a ɛwɔ me so nti.+ 9 Mikoduu asubɔnten kɛse no agya amradofo+ no nkyɛn, na mede ɔhene nkrataa no maa wɔn. Ɔhene maa asahene ne apɔnkɔsotefo nso kaa me ho kɔe. 10 Bere a Horonni+ Sanbalat+ ne Ammonni+ Tobia,+ ɔsomfo no, tee no, ɛyɛɛ wɔn yaw kɛse+ sɛ obi aba rebɛhwehwɛ yiyedi ama Israel mma. 11 Mikoduu Yerusalem, na metenaa hɔ nnansa. 12 Na mesɔree anadwo, me ne mmarima kakraa bi a wɔka me ho, nanso manka nea na me Nyankopɔn de rehyɛ me koma mu sɛ menyɛ mma Yerusalem+ no ho asɛm ankyerɛ obiara.+ Ná aboa biara nso nka me ho sɛ aboa a mete no so no nko. 13 Mefaa Obon Pon+ no mu fii adi anadwo faa Ɔtweaseɛ Nsuaniwa no anim kɔɔ Sumina Pon no ano,+ na merekɔ nyinaa na merehwɛ Yerusalem afasu no,+ sɛnea na abubu na wɔde ogya nso ahyew n’apon no.+ 14 Na mitwaam kɔɔ Nsuaniwa Pon+ no ano toaa so kɔɔ Ɔhene Ɔtare no ho, na aboa a mete no so no annya baabiara amfa. 15 Ɛnna metoaa so faa osubon+ no mu anadwo no, na mehwɛɛ afasu no ara; ɛno akyi no, mesan m’akyi bɛfaa Obon Pon+ no mu bae. 16 Ná asoafo+ no nnim baabi a mekɔe ne nea na mereyɛ; na Yudafo no ne asɔfo no ne atitiriw ne asoafo no ne adwumayɛfo nkae no nso, na minnya nkaa biribiara nkyerɛɛ wɔn. 17 Afei meka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Moahu sɛnea yɛn asɛm ayɛ mmɔbɔ, sɛnea Yerusalem ayɛ amamfõ na wɔde ogya ahyew n’apon. Mommra mma yɛnto Yerusalem afasu no bio, na yɛankɔ so antena yɛn ahohora mu.”+ 18 Na mekaa sɛnea me Nyankopɔn nsa+ adi aboa me+ no kyerɛɛ wɔn, ne ɔhene nsɛm+ a ɔka kyerɛɛ me no. Ɛnna wɔkae sɛ: “Momma yɛnsɔre na yensi.” Enti wɔhyɛɛ wɔn nsam den maa adwuma pa no.+ 19 Bere a Horonni Sanbalat+ ne Ammonni+ Tobia,+ ɔsomfo no,+ ne Arabiani+ Gesem+ tee no, wodii yɛn ho fɛw,+ na wobuu yɛn animtiaa kae sɛ: “Dɛn na moreyɛ yi? Ɛnyɛ ɔhene na moretew n’anim atua yi?”+ 20 Nanso, mibuaa wɔn sɛ: “Ɔsoro Nyankopɔn no,+ Ɔno na ɔbɛma asi yɛn yiye,+ na yɛn a yɛyɛ ne nkoa no, yɛn na yɛbɛsɔre asi; na mo de, munni kyɛfa+ ne hokwan ne nkae+ biara Yerusalem.”